people Nepal » विप्लवले एनसेलमाथि फेरि कारवाही गर्ने? विप्लवले एनसेलमाथि फेरि कारवाही गर्ने? – people Nepal
विप्लवले एनसेलमाथि फेरि कारवाही गर्ने?
Posted on July 23, 2017 by Tara Nidhi
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पार्टीसँग गरेको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । चेतावनीपछि नेकपा र एनसेलबीच गत वर्ष भएको सहमति समेत खुलासा भएको छ । एनसेलले सहमित उल्लंघन गरेपछि नेकपाको यस्तो चेतावनी आएको हो ।
एमसीसी राजनीतिक अस्त्र, कस्को के स्वार्थ ?